Dammaanad-qaadis cusub oo ah Khaliijka Gacanka Gacanka ee Xiran 3 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirHubinta Cusub ee Gacanka Blue Gulf 3 Sweeper
29 / 01 / 2017 35 Izmir, tareenka, SAWIRADA, GUUD, TURKEY
Baadhitaanka cusub ee Blue Bay 3 Baydka Bari: Xirmooyinka cusub ee buluugga ah ee loo yaqaan "Blue Bay 3" ee ku yaalla degmada caasimadda ee Izmir ayaa noqon doonta markii ugu horreeyay ee Izmir oo leh mawduuc soo ururinta qashinka dareeraha kaas oo si degdeg ah uga jawaabaya masiibooyinka deegaanka sida shidaalka saliidda. Markabka 1.7 Milyan ee euro ayaa sidoo kale awoodi doona inuu soo qaado qashinka iyo maraakiibta maraakiibta xamuulka ah haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah.
Magaalada Metropolitan Municipality waxay xoojinaysaa gawaaridooda markab cusub oo leh qalab farsamo. Blue Gulf 3 ", oo awood u leh in la ururiyo qashinka dareeraha ah iyo" caqabado faafaya oo ka soo horjeeda degmooyinka caasimadda, ayaa la dhameeyay waxaana lagu bilaabay galay markabka Tuzla, Istanbul. Markabka cusub, oo suurtagelin doonta jawaab deg-deg ah oo ku saabsan masiibooyinka dabiiciga ah, wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyey ee ku yaal İzmir oo leh qaabkan. Blue Gulf 3, oo la filayo in uu yimaado Izmir bisha Febraayo, labadoodaba si dhakhso ah ayaa wax uga qaban doona khatarta saliidda ee laga yaabo inay dhici karto oo ay awoodi doonaan inay qaadaan qashinka iyo maraakiibta maraakiibta gawaarida marka ay xaalad degdeg ah jirto.
Waxay xaaqaysaa oo diyaari doontaa dufanka
Markabka ayaa la dhisay si wax ku ool ah loola macaamilayo wasakheynta saliidda ee badda dhexdeeda waxayna leedahay caqabado la yiraahdo "Fence Type" ama "Curtain Type type foam with float float. Laba qof oo "shimbirayaal ah ayaa la soo ururiyay si loo soo ururiyo qashinka shidaalka ee ku yaalla xadka.
Nooca dhaadheer ee laba geesoodka ah ee markabka waa mitirka 15 28 dhererka dheer iyo mitirka 6 15 ballaaran oo ballaaran. Markabku waxa uu leeyahay hijiso 1,5 iyo qalabka 2. Markabka, oo leh qashin ururinta qashinka iyo kaydka qashinka ee qashinka loogu talagalay adeegyada qashinka adag, waxay qashinka ku ururinayaan inta badan xeebaha sare. Blue Gulf 2, oo qiimaheedu yahay 1 million 722 kun oo Euros ah oo ku yaalla Magaalada Boosaaso, ayaa soo ururin doonta qashin adag iyo saliideed waxayna ku wareejinayaan xarumaha qashinka ee Halkapınar iyo Gediz.
Marka Tank Biyaha Tanku "buuxsamo.
Xiddiga Blue Bay 3 badda waxaa sidoo kale ka mid ah "Nidaamka Kaydka Kaydka Nuugyada ee loo isticmaalo Yurub. Waxaa loogu talagalay qashinka dareeraha ah ee lagu dulsaaray guddiga, nidaamku wuxuu hayaa munaasabadda MNNUMX mashiinka kaydka ah ee dukaanka lagu duubo. Marka markabka uu bilaabo inuu soo ururiyo qashinka, taangiga dabka waxaa lagu tuuraa badda oo wuxu ka shaqeeyaa markabka. Haddii taangiyada ay buuxsamaan, taangig kale ayaa la geeyaa xarumaha qashin qubka leh ee la socdo markabka kormeerka. Mashiinka biyo saarista ayaa loo adeegsadaa in lagu faaruqiyo taangiyada iyadoon waxyeello u geysan deegaanka.
Blue Bay 3, markabka cusub ee İzmir, waxay u suura galineysaa shaqaalaha ka shaqeeya markabka in ay soo farageliyaan qashinka iyagoo aan taaban gacmahooda iyada oo ay ugu wacan tahay nidaamkeeda horumarsan. Intaa waxaa dheer, waxaa suurtagal ah in la xakameeyo jawiga oo dhan adoon ka tagin kameradda 7.
Qalabka Gacanka ayaa la qiimeynayaa
Hubinta Mapfre ee Marmaray
Marmaray Guud waxaa ku jira caymis
Gaadiidka gawaarida ayaa hadda ku jira dammaanadda TSE
Mashruucyada IZBAN ayaa ka soo horjeeda sugida ammaanka ganacsiga
Nidaamyada farsamada ee hoos yimaada hubinta LMC
Generaliden Robin Hood Qiimeeynta Hubinta Wanaagsan ee Driver
Maanta taariikhda: 30 Janaayo 1929 sharciga 1483 Taariikhda